Spring Tide (2020) | MM Movie Store
မိသားစုတဈခုကို နိုငျငံရေးနှငျ့ယှဉျပွီး ရိုကျပွတဲ့ကားကိုပွပါဆို ဒီကားလေးကို လကျညှိုးထိုးရမှာပါပဲ ။ဘာလို့လဲဆိုတော့…ဒီဇာတျကားထဲမှာပါတဲ့ ဇာတျကောငျတဈယောကျခငျြးစီကပွောသှားတဲ့စကားလုံးတိုငျးက သာမာနျမိသားစုတဈခုမှာပွောတာထကျကို ပိုပွီးလေးနကျလို့ပါပဲ။
ဉပမာ… နငျက သတငျးသမားဖွဈပွီး နိုငျငံကိုအာခံတယျပေါ့… အဲ့ဒါက ငါ့အိမျမှာနပွေီး နငျကငါ့ကို ပွနျပွီးအာခံတာနဲ့အတူတူပဲ အာခံခငျြရငျ ငါ့အိမျမှာမနနေဲ့… ကဲ ဘယျလိုထငျပါသလဲ ပရိသတျကွီး ? ဘာသာပွနျသူအထငျကတော့ ကှနျမွူနဈနဲ့ ဒီမိုကရစေီ ကိုပါးပါးလေး ရိုကျပွနသေလိုပဲ ။
တရုတျဆိုတာက ဆငျဆာလညျးကွမျးတယျမလား ။ အဲ့တော့ ပါးပါးလေးနဲ့ပဲ ထညျ့သှားတာ ။ အမကွေီးကတော့ အရငျစနဈနဲ့တိုငျးပွညျ ၊ သမီးကတော့ တျောလှနျခငျြတဲ့သူ၊ မွေးကတော့ အမနေဲ့သမီးက ပုံသှငျးခငျြတဲ့ ပွညျသူလေးပေါ့ ။ အဲ့လိုမတှေးဘဲ ပုံမှနျ မိသားစုကားလေးလို့ သတျမှတျပွီး ကွညျ့ရငျလညျးအဆငျပွပေါတယျဗြာ…..
မိသားစုတစ်ခုကို နိုင်ငံရေးနှင့်ယှဉ်ပြီး ရိုက်ပြတဲ့ကားကိုပြပါဆို ဒီကားလေးကို လက်ညှိုးထိုးရမှာပါပဲ ။ဘာလို့လဲဆိုတော့…ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ချင်းစီကပြောသွားတဲ့စကားလုံးတိုင်းက သာမာန်မိသားစုတစ်ခုမှာပြောတာထက်ကို ပိုပြီးလေးနက်လို့ပါပဲ။
ဉပမာ… နင်က သတင်းသမားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံကိုအာခံတယ်ပေါ့… အဲ့ဒါက ငါ့အိမ်မှာနေပြီး နင်ကငါ့ကို ပြန်ပြီးအာခံတာနဲ့အတူတူပဲ အာခံချင်ရင် ငါ့အိမ်မှာမနေနဲ့… ကဲ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ပရိသတ်ကြီး ? ဘာသာပြန်သူအထင်ကတော့ ကွန်မြူနစ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကိုပါးပါးလေး ရိုက်ပြနေသလိုပဲ ။
တရုတ်ဆိုတာက ဆင်ဆာလည်းကြမ်းတယ်မလား ။ အဲ့တော့ ပါးပါးလေးနဲ့ပဲ ထည့်သွားတာ ။ အမေကြီးကတော့ အရင်စနစ်နဲ့တိုင်းပြည် ၊ သမီးကတော့ တော်လှန်ချင်တဲ့သူ၊ မြေးကတော့ အမေနဲ့သမီးက ပုံသွင်းချင်တဲ့ ပြည်သူလေးပေါ့ ။ အဲ့လိုမတွေးဘဲ ပုံမှန် မိသားစုကားလေးလို့ သတ်မှတ်ပြီး ကြည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ…..